Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooIbsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo
Ajjeechaa Artist Haacaaluu Hundeessaan Walqabatee Fincila Oromiyaa Keessatti Geggeeffamaa Jiru Ilaalchisee Ibsa Gabaabaa Jaarmiyaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname.
Ajjeechaa gara jabinaa fi kan ummata Oromoo mara rifaasisee gaddatti galche Artistii urjii sabaa ta’e Haacaaluu Hundeessaan Qeerroon Bilisummaa biyya keessaa fi biyya alaa gaddaa hiriyyaa hin qabne keessa galchee akka jiru beekamaa dha.
Ajjeechaan qaroo sabaa Artist Hacaaluu Hundeessaa irra gahe kallattii qabsoo saba Oromoo dabsuu fi ummata Oromoo gabrummaa keessaa hin baane keessatti naquuf jecha akka meeshaa polotikaatti fayyadamuuf bobbaan ykn duulli siyaasaa deemaa jiru ifatti argama. Waxabajjii 29,2020 wareegamuu Artist Hacaaluu Hundeessaan wal qabatee mootummaan qormaata haqaa fi qaamni walaba ta’e qoratee akkaataan ajjeechaa goota kanaa ummata Oromoofis ta’e saba biyya lafaan akka ifa ta’u jedhamee gaafatamus hanga ammaatti ololaaf fayyadamuun qondaalotii fi hogganootiin mootummaa gaafatamummaan itti hin dhagahamiin akka meeshaa ololaatti fayyadamanii dhaabota siyaasaa mootummicha morman irratti duula media of harkaa qabaniin bananii jiru.
Qeerroon Bilisummaa guyyaa artistiin kun wareegame Waxabajjii 29,2020 irraa kan eegale godinoota Oromiyaa mara keessatti bifa qindaayee fi gootummaan guutameen diddaa fi falmaa mirga ummata Oromoo itti fufee jira. Wareegami ol aanaa godinootaa fi magaalota keessatti kafalamaa jira. Mootummaan ta’e jedhee Oromiyaa dirree lolaa fi dirree hokkoraa gochuun akka ummanni tasgabbii hin arganne taasisaa jira. Waraanni raayyaa ittisa biyyaa gaafatamummaan osoo itti hin dhagahamiin magaalaa fi baadiyyaa keessatti ummata saamuu fi ajjeessuu gara malee dararuu hojii guyyaa godhatee jira. Hidhaan dararaminii fi ummati baqatee bosonatti dheessuun Oromiyaa godina hunda keessa jira. Haalli kun fala dhabuu irraan kan ka’e Qeerroo fi Qarreen Oromoo caasaa bifa dursee diriirfatee lafaa qabuun jijjiiraa hunde qabeessaa fi injifatnoo ummata Oromoo ifatti baasu
muldhisuuf falmaa hadhaawaa gochuun magaalota hundatti hanga ammaa Fincilli Xumura Gabrummaa itti fufee jira. Wareegama kana hin jedhamnes baasaa jira.
Sababaa taajaajila Internet muruu mootummaan wal qabatee Qeerroon Bilisummaa Oromoos t’ae dhaabotiin mirga namoomaaf falman hundi ibsoota baasan ykn sagalee qaban aduunyaan dhageessisuu irratti rakkoon mudateera. Ajjeechaa hidhaa jiru fi sochii diddaa gabrummaa godina hunda keessatti hanga ammaa itti fufee jiru bifaa fi akkaataan tti gabaafamu dhabamee jira. Haala kanaan ummata Oromoo sagalee isaa ukkamsanii ajjeessuu fi hidhaatti guuruun itti fufee jira.
Waxabajjii 29,2020 irraa kaasee odeeffannoon (data) Qeerroo bilisummaa qaqqabe akka ibsutti hanga ammaa ummanni nagaa gaddasaa ibsachuuf ba’e 482 rasaasa humnoota mootummaatiin wareegamee jira, Namoonni nagaan 7000 ol ta’an ukkamsamanii bakka buuteen dhabamee jira. Odeessi godinaalee hundarraa funaaname kun akka addeessutti kanneen wareegaman malee namoonni 1300 madoo taasisamanii jiru. Kanneen madaa’anis tajaajila fayyaa dhorkamanii hedduun isaanii guyyaa du’aa eeggataa jiru.
Wareegamni kunniin garuu sochii Qeerroo Bilisummaa duubatti hin deebifne. Deebisuufis hin jiraatu. Falmaan waliigalaa qabsoo ummata Oromoo hogganummaa Jaarmiyaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo fi jaarmota siyaasa haqa Oromoof falmaniin itti fufee jira. Hang galma geenyamutti FXG magaalotaa fi baadiyyaa keessatti deemaa jiru guyyaa tokkoof illee kan hin dhaabbanne ta’uu ummata keenyaaf mirkaneessuu barbaanna, Caasaan Qeerroo Bilisummaa kan durii caalaatti daran babal’atee fi jabaatee, naamusaa fi ogummaadhaan karoora baafatee hanga sirna gabroomfataa dullacha Abiy Ahmad duuba dhukatee nutti fe’amuuf abjootaa jiru kun hundeen buqqa’utti murannoon kan itti fufu ta’uu mirkaneessina.
Wareegamuu Artist Hacaaluun wal qabatee duulli Oromoo fi Oromiyaa irratti yeroo ammaa kana banamee jiru kanneen armaan gadii keessatti argamu.
Hogganoota fi miseensota dhaabota karaa nagaa biyya keessatti qabsoofna jedhanii hidhuu;Addattis hogganootaa fi miseensota akkasumas deggertoota ABO fi KF
Waajjiroota mormitootaa fi qabeenya mormitootaa kan ta’e hunda saamuu;
Media lee maqaa Oromoon ijaaraman kan akka OMN, ONN fi Sagalee Qeerroo(SQ) irratti duula banuun akka isaan hin tamsaasne dhorkuu, gaazexessitoota hidhuu;
Diddaa Qeerroo Bilisummaa dura dhaabbachuuf jecha magaalotaa fi baadiyyaa keessa waraana afaan fi aadaa Oromoo hin beeknee fi jibba ummata Oromoo irraa qaban jedhanii yaadan naannoolee biroo irraa fidanii Oromiyaa keessa bobbaasuun ummata reebisuu fi ajjeesisuu;
Tajaajiloota ummataa kanneen akka ibsaa, bishaan, karaa, geejjiba, kutuu; maneen yaalaa kan dhuunfaa fi mootummaa cufsiisuu;
Tajaajjilli Internet guutuu biyyittii keessatti akka cufamuu fi odeessi biyya san keessaa akka hin dhaga’amnee fi hin baane daandii quunamtii hunda hula isaa cufuu;
Abbootii amantii, barsiisota, maanguddoota naannoo naannootti kabajamoo ta’an godina Oromiyaa hunda keessaa doorsisuu fi salphisuun hidhaatti guuruu; fi kkf ummata Oromoo irraan gahaa
Mootummaan PP lola gosaa fi gosa jidduu fakkeessuun daldala siyaasaa media fi kaadirota isaa keessaan deemsisaa jira. Qabsoon Qeerroon Bilisummaa Oromoo taasisu saba kamiinuu kan diinaffate osoo hin taane haqa ummatootaa ukkamame deebisuu kan akeekkate dha. Qeerroon mirga saba Oromoo dhugoomsuu irra darbee akeeka siyaasaa addaa akka hin qabne diddaa fi sochii baroota dheeraaf taasisaa ture ragaa dha. Kanaaf ummanni keenya biyya keessaa fi alaan jiru akkuma barrota darbanii san tokkummaa isaa jabeessee garaagartummaa fi wal bubuusuu tokko malee qabsoo bilisummaa Oromoo bakkaan gahuuf akka Jaarmiyaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo tumsu dhaammanna.
Mootummaan PP carraa fi obsa yeroo dheeraa ummanni Oromoo keenneefii tuffachuun akka sabi keenya biyya lafaa irratti salphatuuf tuffii ummataa fi dhaabota siyaasaaf qaban ifatti muldhisanii jiran. Hoogganoota siyaasaa Oromoo maal nadhibdeedhaan hidhuu, dararuu fi maqa balleessiin media harkaa qaban irratti balaalefachuu fi ragaa tokko malee maqaa xureessuun tuffii kana agarsiisa. Hooganoota sabni Oromoo akka qaroo ijasaatti ilaalu tuffachuun ammoo saba Oromoo tuffachuu dha. Hoogganoota sabni Oromoo abdatu xiqqeessuu fi hidhanii dararuun saba Oromoo jibbuu dha. Haalli kunis akka jijjiiramuuf filannoon qabnu tokkoof tokko dha. Akkuma aadeffannee beeknutti qabsoo bilisummaa finiinsuun gabrummaa hiddaan buqqifnee ummata keenya ifa bilisummaa fi dimookraasii argamsiisuu qofaa dha.
Akka kanaan, Mootummaan PP ofiin jedhu Koloneel Abiy Ahmadiin durfamu hatattamaan hojiitti hiikamuu baannaan abiddi warraaqsaa amma qabatee jiru kun kan hin qabbanoofne ta’uu Qeerroon Bilisummaa Oromoo gadi jabeessee akeekkachiisa.
Ajjeechaan Artistii keenya jaalatamaa Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame garee mootummaarraa walaba ta’een hatattamaan qoratamee akka ummataaf ifa ta’u. Yakka kana kanneen raawwataman seeratti akka dhiyaatan.
Muummichi Ministeera Koloneel Abiy Ahmad hatattamaan akka hojii gadi lakk Mootummaan PP yerron aangoosaas waan dhumateef diigamee mootummaan cehumsaa akka ijaaramu.
Hidhaa fi ajjeechaan ummata nagaa irratti raawwataa jiru hatattamaan akka dhaabbat
Hoogganoota ol aanoo ABO fi KFO dabalatee hidhamtoonni siyaasaa hatattamaan akka hiikama
Humni waraanaa Lixa, Kibbaa fi Kaabaa Oromiyaatti bobbaafamee maqaa WBO sakattaana jedhuun ummata nagaa dararaa jiru hatattamaan Oromiyaa keessaa ba’ee kaampii isaatti akka deebi’u. Nageenyi ummata Oromoo poolisoota dhalootaan Oromoo ta’anii fi amanamummaa ummata Oromoo qaban qofaadhaan akka tikfam
WBO sakattaana maqaa jedhuun namoota ajjeefamanii fi qaamaa hir’ataniif hirphi barbaachisu akka kennam
Mariin barbaachisaan mormitoota siyaasaa hunda waliin godhamee sagantaan dhaabbataan itti filannoon haqaa fi walaba ta’e akka geggeeffa
Sabquunnamtiin ummataa kanneen akka Interneetii, Bilbilaa fi humna ibsaa hatattamaan akka gadi lakkifama
Miidiyaaleen ummata walabaan tajaajilan kanneen akka OMN, ONN akka hojii eegala Gaazexessitoonni isaani akka gadi lakkifaman. Meeshaaleen waajjira isaaniirraa saamaman akka deebifaman.
Hegereen siyaasa biyyichaa fi garamitti deemna kan jedhu mormitoota siyaasaa hunda hamate waliin hatattamaan ta’ee aangoon PPn qofaa dhuunfate akka xumuramu.
Gaaffileen keenya armaan olii hin guutaman taanaan Qeerroon Bilisummaa Oromoo akkuma kanaan duraa fincila jalqabame guutuu Oromiyaa keessatti finiinsuudhaan mirga abbaa biyyummaa kan kabachisiisu ta’uu gadi jabeessee beeksisa.
Xumurarrattis, ummata Oromoo fi Qeerroon biyya keessaa fi alaa gootummaa abbootii keenyaa fi qabsoo irraa dhaaltaniin itti fufiinsaan mirga ummata keessanii falmaa jiraachuu keessan waan arginuuf kabajaa ulaanaa ni isiniif qabna. Akkuma durii tokkummaa keessan jabeessaa. Hin qoqqoodamiinaa. Garaagarummaa siyaasaa tokkoon malee qabsoo itti fufnaan yeroon haqa keenya harkatti galfatnu as dhihoo ta’uu dhaammanna. Hogganni Qeerroo Bilisummaa Oromoo Oromiyaa guutuu keessatti mootummaa akka raasuu dandayuu fi qabsoo itti fufsiisuu dandeettii qabu isiniif mirkaneessina. Qeerroon akeekaa ifaa qabatee tarsiimoo bilchaataa fi naamusaan masakama. Caasaa ititaa kan salphaatti diinaan hin raafamne qaba. Tooftaa fi tarsiimoo baafatee qabuunis mootummaa ummata Oromoo dararaa jiru kana akka jilbeeffachiifnu shakkii tokkollee hin qabnu. Ummanni keenya biyya alaa fi keessaa abdii PPn gara cee’umsaatti nu geessa jedhu tasumaa akka hin jirre hubattanii sochii eegaltan jabeessitanii akka itti fuftanii fi Jaarmiyaa Qeerroo Bilisummaa cinaa akka dhaabbattan asumaan dhaammanna.